Tononkiran'i Solomona 5:2-16 "2 Natory aho, nefa nahatsiaro ihany ny foko; Injay! ny feon’ny malalako, izay mandòndòna ka manao hoe: Vohay aho, ry havako ampakariko, Ry voromailalako, ilay ahy tsy misy kilema; Fa vonton’ando ny lohako, Ny voloko milantolanto dia kotsan’ny andon’ny alina. 3 Fa hoy izaho: Efa niala akanjo aho, ka hataoko ahoana indray no fiakanjo? Efa nioza tongotra aho, ka hataoko ahoana no fandoto azy? 4 Nampiditra ny tànany teo amin’ny loaka ilay malalako, dia nangorakoraka azy ny foko. 5 Nitsangana hamoha varavarana ny malalako ihany aho, ary nitete miora ny tanako, eny, ny rantsan-tanako nitete ranon’ny miora teo amin’ny famohana ny hidin-trano. 6 Namoha varavarana ny malalako aho, kanjo efa nihodina izy ka lasa; Very hevitra aho tamin’ny nitenenany; Nitady azy aho, fa tsy nahita; Niantso azy aho, fa tsy novaliany. 7 Nahita ahy ny antily izay mandehandeha eny an-tanàna, dia nikapoka ka nandratra ahy; Ny mpiambina ny mànda nanala ny lamba fisaronako. 8 Mampianiana anareo aho, ry zanakavavini i Jerosalema: Raha mba hitanareo re ny malalako, dia ahoana no holazainareo aminy? Lazao fa mararim-pitia aho. 9 Inona ny malalanao mihoatra noho ny malala sasany, ry tsara tarehy amin’ny vehivavy? Inona ny malalanao mihoatra noho ny malala sasany, no dia mampianiana anay toy izao hianao? 10 Ny malalako dia sady fotsy mangatsakatsaka no mena, notsongaina tamin’ny alinalina. 11 Ny lohany dia toy ny tena volamena tsara; Ny volony dia milantolanto sady mangilohilo toy ny goaika. 12 Ny masony dia tahaka ny voromailala eo anilan’ny sakeli-drano, mandro amin’ny ronono sady tahaka ny vato soa alatsaka an-tranontranony izy. 13 Ny takolany dia tahaka ny tanim-boninkazo misy zava-manitra eo an-tsaha, dia tahaka ny tany navosaina misy voninkazo manitra. Ny molony dia tahaka ny lilia sady mitete ranon’ny miora. 14 Ny tànany dia tahaka ny anja-bolamena voaisy krysolita; Ny tenany dia tahaka ny ivory voarafitra tsara sady misarona safira; 15 Ny ranjony dia tahaka ny andry vatosanga miorina amin’ny faladia tena volamena; Ny tarehiny dia tahaka an’i Libanona, tsara toy ny sedera. 16 Mamy dia mamy ny vavany, eny, maha-te-ho-tia avokoa izy. Toy izany ny malalako, ary toy izany ny sakaizako, ry zanakavavin’i Jerosalema!"
Ny vehivavy sy ny tokantranony. Nanana ny tsininy ity vehivavy ity na dia olona tena tiana indrindra aza: tsy nampiraika azy ny antson’ny vadiny (2-3). Rehefa tapa-kevitra hamaly izy dia efa lasa ralehilahy. Nametraka tanjona hamonjy ny tokantranony izy ka lasa nitady ny vadiny teo noho eo na dia nitondrany ratra aza izany (6-8). Niantso ombay mitady tamin’ny namana ihany koa izy. Tamin’izy ireo no nitanisany izay mampihavaka ilay olon-tiany (10-18). Azo avotana tsara ny tokantrano mandalo olana ary ny fisian’ny vavolombelon’ny fifankatiavana no fiarovana azy. Ho an’ny vehivavy: mahadinika ny vatan’ny vadinao ve ianao ka afaka mitanisa ny fahatsarany (10-18; 1Korintiana 7:3-4)? Afaka milaza ve ianao fa notsongainao tamin’ny alinalina izy? Fahamarinana: «ny vehivavy hendry dia samy manao ny tranony.» Ohabolana 14:1. “Natory aho,… Injay! ny feon’ny malalako”(2). Na mandalo torimaso aza ny mpino dia mahaavaka ny feon’ny Tompony ihany ny fony. «Natory aho»: ny fiaikena tsotra ny torimaso dia efa mariky ny fifohazana sahady. Io fifohazana ao am-po io no manaitra ny ao amintsika manontolo hihazakazaka ho any amin’ny Tompo (10-18) sy hitoetra eo anilany. Ary satria velona Izy dia mitoetra ao amintsika koa ny fahavelomany (Jaona 14:19a). Raha misy mpino iray lavon’ny fahotana dia mbola afaka manavaka ny Vaovao Mahafaly amin’ny vaovao hafa rehetra ny fony (2) fa ny fiaikeny heloka no hahafahany misitraka indray ny fifalian’ny fiarahana amin’i Kristy. Fahamarinana: Ao amin’i Jesosy Kristy ihany no misy ny fifaliana tanteraka (Jaona 15:11).